Kaalintee ayay Somalia ka gashay qiimeynta ganacsiga ee bankiga adduunka? - Caasimada Online
Home Warar Kaalintee ayay Somalia ka gashay qiimeynta ganacsiga ee bankiga adduunka?
Kaalintee ayay Somalia ka gashay qiimeynta ganacsiga ee bankiga adduunka?
Bangiga Adduunka ayaa baahiyey warbixinta sanadlaha ee qiimeynta howlaha saameynta ganacsiga ee Caalamka. Taasi oo lagu eegay howlaha saameynta ganacsiga iyo kororka dhaqaalaha ee 190 waddan oo ku yaalla caalamka.
Warbixinta oo loogu magac daray “World Bank’s Doing Business 2018 report” ayaa lagu xusay in aasaas uga dhigeen habka ugu sahlan in ganacsi loo abuuri karo, xuquuqda milkiyadda, nidaamka xisaabaadka ganacsiga, qandaraasyadda, xoojinta sharciyadda maalgashiga iyo fududeynta deymaha iyo tirada wax-soo-saarka kale.
Warbixinta Baanka Adduunka (World Bank) ayaa lagu sheegay inuu dalka New Zealand uu safka hore ee kaalinta 1-aad ka galay qiimeyntaasi. Halka Singapore ay soo gashay kaalinta 2-aad.
Mareykanka ayaa liiskaan ka galay booska 6-aad, halka dalka Shiinaha uu galay kaalinta 78-aad, waxaana booska 100-aad ku jira dalka Hindiya.
Warbixinta ayaa waxaa lagu muujiyey in Soamaaliya ay tiigsatay kaalinta 190-aad ee ugu hooseysa qiimeyntaan caalamiga ah.
Bangiga Adduunka waxa uu tilmaamay in ay Soomaaliya la daalla-dhaceyso xaalad siyaasadeed oo tabar daran, dhaqaale liita iyo sii socashadda cabsida ammaan-xumida.